Ity Class Economy Premium Economy ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny fanavaozana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ity Class Economy Premium Economy ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny fanavaozana
Miverina eny amin'ny lanitra ny fiaramanidina A380 superjumbo an'ny Emirates
Sidina vaovao avy any Dubai mankany London
Kilasy Economy Premium ihany no misy amin'ny maha-fanavaozana ny Emirates
Nanolotra A380 i Emirates
Nanambara i Emirates fa hametraka ny fiaramanidina fiaramanidina A380 farany misy azy izay misy seza toekarena vaovao sy fanatsarana mihaja manerana ny kabine rehetra mankany London Heathrow.
Manomboka amin'ny 4 Janoary, ny mpandeha manidina eo anelanelan'i Dubai sy London Heathrow dia afaka miaina ny A380 farany an'ny Emirates. Miasa amin'ny EK003 / 004, ny fiaramanidina dia kasaina handao an'i Dubai isan'andro amin'ny 14:30, tonga amin'ny 18: 20hrs any London Heathrow. Ny sidina miverina dia miala any Londres amin'ny 20: 20hrs ary tonga any Dubai ny andro manaraka amin'ny 07: 20hrs. Ny fotoana rehetra eto an-toerana.
Ny Emirates tamin'ny herinandro lasa teo dia namoaka ny A380 farany misy azy miaraka amin'ny seza toekarena vaovao vaovao izay manome seza hatramin'ny 40 santimetatra, ankoatry ny seza kilasy toekarena vaovao mitovy amin'ireo napetraka ao amin'ny fiaramanidina gamechanger Boeing 777-300ER farany teo, manatsara ny A380 malaza indrindra Kilasy voalohany sy orinasa miaraka amin'ny sonia Shower Spa sy Onboard Lounge, ary loko sy fittings mamelombelona manerana ny cabins rehetra.
Mandra-pahatongan'ny seza Premium Economy miditra ao amin'ny lisitra misy azy, mikasa ny hanolotra azy ireo ny zotram-piaramanidina ho toy ny fanavaozana ny toerana ho an'ny mpanjifany sarobidy araka ny antonony. Ny sonia hafa rehetra Emirates A380 Voalohany, ny kabinetra Business and Economy dia azo alaina ao amin'ny emirates.com na amin'ny alàlan'ny agents agents.
Namerina tamin'ny laoniny soa aman-tsara ny tamba-jotra ny seranam-piaramanidina tato anatin'izay volana lasa izay, nitondra traikefa nanao sonia an-tsambo sy teny an-kianja miaraka amin'ny fepetra feno hametrahana ny fahasalaman'ny mpanjifany sy ny mpiasany.
Emirates dia manompo an'i London Heathrow miaraka amin'ny sidina 5 isan'andro izay 4 no miasa amin'ny A380. Ny sidina dia miasa ihany koa sidina 10 isan-kerinandro mankany Manchester, ary sidina isan'andro mankany Birmingham sy Glasgow.
Emirates dia manompo tanàna 99 manerana an'izao tontolo izao, manolotra fidirana mora foana mankany Dubai ary mandroso hatrany amin'ireo toerana malaza any Afrika, Amerika, Azia, Eropa ary Moyen Orient.
Misokatra i Dubai ho an'ny mpitsidika iraisam-pirenena sy mpitsidika fialamboly. Manomboka amin'ny tora-pasika feno masoandro sy ireo hetsika lova ho an'ny fandraisana vahiny sy fialamboly kilasy manerantany, Dubai dia manolotra karazana traikefa an-tsarimihetsika manerantany. Io no iray amin'ireo tanàna voalohany eran-tany nahazo tombo-kase Safe Travels avy amin'ny World Travel and Tourism Council (WTTC) - izay manohana ny fepetra feno sy mahomby any Dubai hiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny vahiny. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fepetra takiana amin'ny mpitsidika iraisam-pirenena mankany Dubai dia tsidiho: www.emirates.com/flytoDubai.
Fifanarahana sy antoka: Ny politikan'ny famandrihana Emirates dia manome ny fahafaha-misafidy sy fahatokisan'ny mpanjifa drafitra ny diany.
Mandeha amin'ny fahatokisana: Ny mpanjifa Emirates rehetra dia afaka mivezivezy am-pitokisana sy amin'ny fandriam-pahalemana amin'ny fiantohana voalohany momba ny dia an-dranomasina sy ny COVID-19.
Fahasalamana sy fiarovana: Ny Emirates dia nametraka fepetra feno amin'ny dingana rehetra amin'ny dian'ny mpanjifa mba hiantohana ny fiarovana ny mpanjifany sy ny mpiasa eto an-tany sy amin'ny habakabaka, ao anatin'izany ny fitsinjarana kitapo fidiovana mirakotra misy sarontava, fonon-tànana, sanitisera tanana ary famafana bakteria amin'ny mpanjifa rehetra.
Pakistan sy Arabia Saodita dia nanohy ny sidina mpandeha